Western Union oo Muslimiin cunsuriyaysay | Somaliska
Xawaalada Caalamiga ah ee Western Union ayaa la ganaaxay ka dib markii ay diideen in ay lacag u diraan rag Muslimiin ah. Xeer ilaaliyada ka hortaga cunsuriyada Diskrimineringsombudsmannen (DO) ayaa sheegay in Western Union ay si aan toos ahayn u cunsuriyaysay labo nin oo Muslimiin ah ka dib markii loo diiday in lacag loo diro taasoo sabab looga dhigay in magacyadooda ay la mid yihiin kuwo Qaramada midoobey ay cuna qabataysay. DO ayaa amray in Western Union ay ragaas siiso mid 10,000Kr halka kan kale la siinayo 5,000Kr. DO ayaa go'aankooda sal uga dhigay in Western Union aysan faahfaahin foomka lacagta lagu diro oo ay tusaale ahaan warbixin dheeri ah ka qaadi kareen macaamiisha si ay u kala saaraan kuwo ku jira Liiska la mamnuucay iyo dadka caadiga ah. Western Union ayaa ah xawaalad caalami ah oo 200 oo wadan ku leh xafiisyo, iyadoo hal ku dhigooda uu yahay xawaalad deg deg ah balse DO ayaa sheegay in Western Union aysan ragaas Muslimiinta ah si deg deg ah ugu adeegin oo mudo ka badan maalin ay qaadatay hawshooda. Ma ahan markii ugu horeysay ee shirkad Sweden ku taala loo ganaaxo cunsuriyad ka dhan ah Muslimiinta. Shirkada boostada ee UPS ayaa la ganaaxay sanadkii la soo dhaafay ka dib markii ay shaqada ka cayriyeen nin Muslim ah garkiisa darteed.
Xawaalada Caalamiga ah ee Western Union ayaa la ganaaxay ka dib markii ay diideen in ay lacag u diraan rag Muslimiin ah. Xeer ilaaliyada ka hortaga cunsuriyada Diskrimineringsombudsmannen (DO) ayaa sheegay in Western Union ay si aan toos ahayn u cunsuriyaysay labo nin oo Muslimiin ah ka dib markii loo diiday in lacag loo diro taasoo sabab looga dhigay in magacyadooda ay la mid yihiin kuwo Qaramada midoobey ay cuna qabataysay.
DO ayaa amray in Western Union ay ragaas siiso mid 10,000Kr halka kan kale la siinayo 5,000Kr. DO ayaa go’aankooda sal uga dhigay in Western Union aysan faahfaahin foomka lacagta lagu diro oo ay tusaale ahaan warbixin dheeri ah ka qaadi kareen macaamiisha si ay u kala saaraan kuwo ku jira Liiska la mamnuucay iyo dadka caadiga ah.
Western Union ayaa ah xawaalad caalami ah oo 200 oo wadan ku leh xafiisyo, iyadoo hal ku dhigooda uu yahay xawaalad deg deg ah balse DO ayaa sheegay in Western Union aysan ragaas Muslimiinta ah si deg deg ah ugu adeegin oo mudo ka badan maalin ay qaadatay hawshooda.
Ma ahan markii ugu horeysay ee shirkad Sweden ku taala loo ganaaxo cunsuriyad ka dhan ah Muslimiinta. Shirkada boostada ee UPS ayaa la ganaaxay sanadkii la soo dhaafay ka dib markii ay shaqada ka cayriyeen nin Muslim ah garkiisa darteed.
Awalba Yuhuud ayaa aas aasatay ayaan maqlay,laakiin si caadi ah inay u shaqeysato ayey ahayd ileyn waa xawilaad,e sida u dhegsan magaceeda.
April 20, 2011 at 11:32
2001 bishi 12 Ayaan lacag soo dhigtay shirkan waxaa leysoodiray waraaq oo leydhahaayo magaca ku bedel magac kale ilaa maanta waxaa ii soo dhoco qaraaqado waano ah oo ley dhahaayom iska bedel magacan ama shirkad kale tag mudadaas ayaan fahmay in magac yada larabo yihin joon,erik,iyo wax saas ah